Horudhaca kulanka Champions League ee caawa ay Kooxda Liverpool booqanayso Napoli… (Mane oo barbareyn kara Drogba) – Gool FM
Kooxdii ugu horreysay ee Ingiriiska ka dhisan oo wada hada hadallo la billawday Philippe Coutinho
Horudhaca kulanka Champions League ee caawa ay Kooxda Liverpool booqanayso Napoli… (Mane oo barbareyn kara Drogba)
Haaruun September 17, 2019
(Naples) 17 Sebt 2019. Waxaa maanta daaha laga qaadayaa heerka guruubyada Champions League, iyadoo ay jiraan kulamo adag oo la ciyaari doono caawa.
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ciyaareysa kulankeeda Champions League caawa, iyadoo booqanaysa naadiga Napoli ee dalka Talyaaniga, halkaasoo ay ka bilaabayso difaacashadeeda Koobkan.
Taariikhda: Talaado, 17 Sept 2019
Garoonka: San Paolo
Divock Origi ayaa ka maqnaanaya caawa kooxda Liverpool kaddib markii uu seegay Liiska 20-kii ciyaaryahan ee Reds oo u safray dalka Talyaaniga, maadaama uu ku dhaawacmay kulankii ay la ciyaareen Newcastle.
Goolhaye Alisson Becker dhaawac lugta ah qaba, Naby Keita oo gumaarka ka sheeganaya iyo Nathaniel Clyne oo jilibka ka dhaawacan ayaa sidoo kale Liverpool ka maqnaanaya muddo dheer.
Taam ahaanshaha daafaca garabka bidix ee Liverpool, Andy Robertson ayaa la qiimeyn doonaa ka hor ciyaarta.
Dhinaca kale Arkadiusz Milik oo ka tirsan kooxda Napoli ayay u badan tahay inuu seegi doono kulankan, kaddib markii uu la maqnaa dhaawac muruqa ah tan iyo bartamihii bishii Agoosto.
Laakiin Lorenzo Insigne kaasoo gool dhaliyey kulankii ay wajaheen Reds markii labada kooxood ay ku kulmeen ciyaarihii isdiyaarinta xilli ciyaareedkan cusub ayaa laga yaabaa inuu taam u ahaado kulankan kaddib markii uu isagoo kaligiis ah tababarka qaadanayey todobaadkii la soo dhaafay.
>- Kani waxa uu noqonayaa kulankii shanaad ee tartammada Yurub ku dhexmara kooxaha Napoli iyo Liverpool, kaddib markii ay labo goor ku kulmeen heerka guruubyada UEFA Europa League xilli ciyaareedkii 2010-11, markalena ay labo goor ku kulmeen heerka guruubyada Champions League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
>- Liverpool ayaan sameynin hal shuut oo bartilmaameed toos ah kulankii ay guuldarro 0-1 UEFA Champions League ka soo gaartay Napoli xilli ciyaareedkii hore, kanina waa marka kaliya 74-tii kulan ee ugu dambeysay tartankan aysan isku dayin hal laad oo isku day bartilmaameed toos ah.
>- Napoli ayaa kaliya hal goor guuleysatay lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay tartammada Yurub la ciyaartay kooxaha Ingiriiska, iyagoo guuldarro la kulmay shanta kulan ee kale, halka xitaa ay ku guuldarreysteen inay gooldhaliyaan saddexdii kulan ee ugu dambeeyey, guusha kaliya oo ay gaareen ayaana ahayd 1-0 ay kaga adkaadeen Liverpool tartanka UEFA Champions League kal ciyaareedkii 2018/19.
>- Labadii olole ee ugu dambeysay UEFA Champions League, Liverpool ayaa dhalisay goolal ka badan oo ah 65 gool, waxayna guuleysteen 15 kulan, waana in ka badan koox kasta oo kale tartankan.
>- Kooxda difaacaneysa UEFA Champions League ayaan laga badinin kulankooda furitaanka UCL xilli ciyaareedkii xigay tan iyo markii AC Milan ay sidaas sameysay kal ciyaareedkii 1994-95 markaasoo ay ka horyimaadeen Ajax, iyagoo tan iyo markaas la yimid 14 guul iyo 10 barbaro.
>- Weeraryahanka kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa dhaliyey 14 gool 24 kulan oo uu ka soo muuqday UEFA Champions League, haddii uu gool dhaliyo kulankiisa xiga ee tartanka, waxa uu barbarayn doonaa rikoorkii Didier Drogba ee 25 kulan oo uu saftay UCL ku dhaliyey 15-kiisii gool ee ugu horreeyay; kaas oo ah haatan ciyaaryahanka Afrikaanka ah ee ugu dhaqsaha badan oo tartankan ka dhaliya 15 gool.
HORDHAC: Wax walba oo aad uga baahan tahay kulanka ay kaga daah furanayaan Borussia iyo Barcelona tartanka Champions League xilli ciyaareedka cusub 2019/20
Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Champions ee caawa ay Kooxda Chelsea qaabilayso Valencia
Pingback: Guud ahaan kulammada caawa la ciyaari doono heerka Guruubyada Champions League & Saacadaha ay soo geli doonaan – Gool FM
Pingback: Guud ahaan kulammada caawa la ciyaari doono heerka Guruubyada Champions League & Saacadaha ay soo geli doonaan - Hargeele - Wararka Somali State